Yiza kunye namaB Beatles - iMbali yeNgoma kunye neNkcukacha
Umculo Abadlali abakhulu
Iingoma zeBeatles: "Yizani kunye"
by URobert Fontenot
Imbali yale ngoma yesiGrike yamaBatles
Ibhalwe ngu: John Lennon (100%) (ebizwa ngokuba nguLennon-McCartney)
Irekhodiweyo: Julayi 21-23, 1969 (I-Studio 3, Abbey Road Studios, eLondon, eNgilani); Julayi 25, 29-30, 1969 (Studio 2, Abbey Road Studios, eLondon, eNgilani)
Ixutyanisiwe: Agasti 7, 1969
Abaculi: UJohn Lennon: amazwi okhokelo, isiginci isiginci (1965 Epiphone E230TD (V) ICasino)
UPawulos McCartney: amazwi okuxhasa, iigitari (1964 uRickenbacker 400IS), ipiyano yamandla kagesi (Fender Rhodes)
UGeorge Harrison: igitala elikhokelayo (1966 iGibson Les Paul Standard SG)
I-Ringo Starr: iingoma (1968 Ludwig Hollywood Maple), i-maracas
Okokuqala kukhutshwa: ngo- Oktobha 6, 1969 (US: Apple 2654), Oktobha 31, 1969 (UK: Apple R5814)
Ifumaneka kwi: (iiCD ngokubhaliweyo)
Abbey Road , (US: Apple SO 383, UK: Apple PCS 7088, iProlophone CDP 7 46446 2 )
I-Beatles 1967-1970 (UK: Apple PCSP 718, US: Apple SKBO 3404, i- Apple CDP 0777 7 97039 2 0 )
I-Beatles 1 (i- Apple CDP 7243 5 299702 2 )
Isikhundla esiphakamileyo seshati: US: 1 (Oktobha 18, 1969); UK: 4 (ngoNovemba 29, 1969)
Iqabane likaTimothy Leary, isazi sezengqondo seHarvard esasiphakathi kweyokuqala ukuphanda iimpawu ze-hallucinogenic of mushrooms e-psilocybin kunye ne-LSD, yayingumlinganiselo wesizwe ngo-1969, xa wagqiba ukugijima kwiGunyana yaseCalifornia ngokuchasene nomntu owayengummeli, ) URonald Reagan. UJohn Lennon, ummangali weLeary's, wacelwa ukuba anikezele ingoma yenkampu esekelwe kwisiqubulo sikaLeary "Yiza kunye, ujoyine iqela."
ULennon wabhala ingoma kunye ne-chorus "Yiza kunye ngoku, musa ukusa, musa ukuza wedwa." Kodwa iLeary yayifumene ingafanelanga ukukhankanya - kwaye ikhefu lakhe lakhawuleza litshatyalaliswa yinto enyanisekileyo yokufumana inambuzane. Ngoko ke yaziswa kwiBeatles endaweni yoko, ithatha indawo yokunikezelwa kwayo kwangaphambili, enye i-heroal-crystal-outtrack "ngaphandle kweCold Turkey". (Le ngoma, eyayiyingozi eyenziwa ngumenzi uGeorge Martin, kamva yaba yinto yokubamba i-solo ye-Plastic Ono Band.)
Ngokusekelwe kumgangatho oqhelekileyo u-Chuck Berry, umculi wenziwa kwi studio, kunye noPawulos ucetyiswa ukuba kuphuculwa ngokukhawuleza ukunika "i-swampier" ukuziva. Umzila wesiseko wabhalwa ngoJulayi 21, 1969; ilizwi elikhokelayo, upiyano wombane, isiginci isiginci, kunye ne-maracas zagqitywa ngosuku olulandelayo. Imizamo eyahlukeneyo yokulandelela ngokuphindwe kabini yazama kwiintsuku ezilandelayo.
Umgca wokuqala kule ngoma - "Nanku udala endala-phezulu, ufika nge-groovin" ngokukhawuleza, "ubonisa ukufana okuqinileyo, umculo kunye neengoma, ku-Chuck Berry ka-1958 ethi" Awukwazi Ukundibamba " ebhaliwe malunga nemoto iyaxoshwa, iya "Khangela kuza phezulu, wayehamba kunye nam"). Olu dumiso oluthile luya kubangela ukukhathazeka okukhulu ebomini bukaYohane, njengoMorris Levy, umgqugquzeli weengxelo kunye nomvakalisi, ophethe inxalenye yeengoma zikaBerry. I-Levy yammangalela uLennon, isatifiketi ekugqibeleni ihleli xa uLennon avuma ukudala i-albhamu yonke yezikhuselo eziphantsi kweLevy. Yakhishwa ngo-1975 njenge- Rock And Roll albhamu. Emva koko uPaul uthi wayenguye owokuqala ukuphawula ukufana phakathi kweengoma ezimbini, kwaye wacetyiswa ukuba unciphise i-tempo ukuze angabonakali kangangoko.
Ekuqaleni uPawulos wayefuna ukucula ngokuvisisana okukhulu noYohane kwingoma yonke, kodwa wavotelwa ngumculi wengoma; Wahlala esikhundleni sokuba afike kwiindawo ezahlukeneyo ngegama elincinci elisekelayo (ezinye zivisisana, ezinye azikho).
Amazwi athi "Woza Ngamanye" ngokuyinhloko angenasiphelo kwisigxina sexesha likaYohn ekupheleni kwexesha lisebenza njenge "Gcina i-Pony" kwaye "Ndingum Walrus." Ibinzana elithi "enye kunye nelinye labathathu" lidla ngokubonwa ngokuthi "uPaul Is Dead" njengamaqhinga okufa kwakhe, ngoxa i-"Ono sideboard" kunye "nomkhwa wokugulisa umlenze" kubhekiselwa kumfazi kaYohn uJoy Ono ("umlenze i-cracker "ibhekisela kumbugcisa waseJapan wokuhamba emqolo ukuyiqhawula). Amagama amaninzi, kuquka "i-mojo filter," "goo goo eyeball", kwaye "ukudubula iCoca-Cola" kucingelwa ukuba ibhekiselele kwiziyobisi; I-BBC ivaliwe le ngoma ngenxa yomgaqo-nkqubo wokungahlali ukudlala iingoma eziqulethe iingxelo zamagama. Ekugqibeleni, ingoma engumxholo kumigca ethi "Umbi / umkhwa wokuvelisa" kwaye "Ukubamba kwisitulo sakhe seengalo / iingalo, u" ziphikisana nanamhlanje.
Ekuqaleni kwengoma, uJohn uvalelwa ehlabelela "ukudubula" phambi kwayo yonke into. I-Bootlegs kunye nevidiyo yeenguqulelo ezibukhombisayo zibonisa ukuba empeleni uyicula "ndidubule," ibinzana elixutywe ngumgca kaPaul kwaye umqhubi wecala lakhe livakalisa ilizwi lakhe. (Isiphumo sisoloko siqhathaniswa, kodwa singabangelwa, ukudayela kwifowuni endala yokujikeleza.) Ecinga ukuba uYohn wadutshulwa wabulawa ngo-1980, le nto ibetha njengokongeza kwimiyalezo yomsindo.
Xa urekhoda le ngoma, uJohn wayesandul 'ukupheliswa kwengozi yemoto eyayizibandakanya yena, Yoko, kunye nabantwana bakhe ababini (ukusuka emtshatweni wangaphambili) ngoJulayi 1, 1969. UJohn wayenqwenela ukuba abekhona ngexesha lokurekhoda kwalo ngoma, ubukhulu bokubeka ibhande kwi studio ukuba ahlale kuyo.
Oku kuye kwabikwa ngephutha njengendlela yokugqibela apho onke amaB Beatles amane adlala ndawonye kwiseseshoni; ukuba irekhodi ngokwenene ingeyabo, ngokufanelekileyo ngokwaneleyo, "Ukuphela," ebhaliweyo ngo-Agasti 8, 1969.
Ikhutshwe ngu: Aerosmith, Count Basie, uBob Belden, Abazalwana bakaJohnson, uSpencer Brewer, I-Butthole Surfers, abaQumrhu beBhodi, uJoe Cocker, uCraig David, uMdakala, uDesmond Dekker, u-Eurythmics, Umlilo, uRichard "Groove" u-Holmes, amaSirayeli, UMichael Jackson, u-Elton John, uSyl Johnson, uTom Jones, uBen E. King, uGladys Knight kunye nePips, uHerbie Mann, u-Delbert McClinton, iMitha, uBuddy Miles, abazalwana baseNewville, i-Oasis, i-Persuasions, uDianne Reeves, i-Rockin 'Dopsie , U-Diana Ross, uShalamar, i-Soundgarden, i-Sugababes, i-Supremes, i-Ike noTina Turner, uJunior Vasquez, uRick Wakeman, uPaul Weller, uRobin Williams, uCassandra Wilson, uZikk Wylde
Elvis Presley Umhla: 1960
Imbali ka-Elvis: ngo-1955
Iqoqo le-Beatles-CD ye-Singles Collection
Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha
Elvis Presley Ixesha: 1976
I-10 yeencwadi eziMnandi zeBeetle
Ezinye iimpembelelo zomculo zokuqala kwiGeorge Harrison
UMniki - kaMoses kaMthetho
'Ndiyicala lokuCyberstalking' - Ibali lomfazi omnye
Ukuqonda iiNkqubela eziTywayo kwiDelphi
IPygmalion - UMthetho owodwa
UBarbara Radding Morgan Biography
Umsebenzi Weziganeko Zabafundi Abafundi
Ukulandelela Umlando wabantu: I-Stone Age ukuya kwi-Middle Ages
Quotes Day Day Quotes
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseJutland
Imibutho yaseAfrika-yaseMelika yeeNkqubela zeNkqubela
Iinqanawa, i-Champagne, kunye neenkolelo
Ukusebenzisa imixholo yokuThuthukisa ukuCacisa ukuFunda
IiSonets Youth Youth
Ukufakela kwi-Grammer yesiNgesi
Izixhobo eziPhambili zokuPhakamisa i-Toprope
"Impembelelo yamaGrama Ray on Man-In-The-Moon Marigolds"
Hyena enkulu (Pachycrocuta)
Ulungelelwaniso lokuBumba kunye neRhetoric
Ibali leBhayibhile likaBhileham kunye neDonki
Iimpahla ezincinane ezigqibeleleyo nguBrachvogel noCarosso
Iphrofayili ye-Serial Killer Edward Gein
Indlela yokusebenzisa iiKlayidi zeFlashini zokufunda uKhemistry